မျှတမှုရှိရန်လောဘကြီးစွာထားပါဟု Fair Launch Trend ကိုစီးနင်းသော DeFi Investor ကိုတိုက်တွန်းထားသည်
In the latest DeFi drama,adeveloper and investor behindatoken called SAFE madeamistake when deployingapiece of code—and now they’re both calling each other out and publishing their private chats, ထိုအဖြစ် token tanks.
YieldFarming.Insure ဖြန့်ချိ with the commendable stated goal to incentivize DeFi traders to protect their investments with insurance instruments. Yield farmers who buy cover on their assets on Yearn Finance’s yinsure.finance, can stake the yNFTs tokens they get in exchange, on YieldFarming.Insure. Stakers would then receive $SAFE tokens in return.
[ဒီပုံပြင်ကိုငါတို့သူငယ်ချင်းများကရေးသားနှင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Defiantနှင့်လည်း၎င်း၏နေ့စဉ်အီးမေးလ်ထဲမှာထင်ရှား။ , အကြောင်းအရာပလက်ဖောင်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေးနှင့်ပွင့်လင်းသောစီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးစာဖတ်သူများကိုစိတ်ဝင်စားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောပုံပြင်များကိုမျှဝေသည်။ သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ဒီမှာ.]
Tags: Defy, တရားမျှတတဲ့, တပ်မက်သော, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ, ပစ်လွှတ်, ကိုယ်ပိုင်, မြင်းစီး, လမ်းကြောင်းသစ်, ကတိုကျတှနျး
Croods2ကို Thanksgiving သို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ Universal က AMC သဘောတူညီချက်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်